साग र च्याउ खानुका अनगिन्ती फाइदा - Likhu Online
साग र च्याउ खानुका अनगिन्ती फाइदा
२३ चैत्र २०७७, सोमबार २२:४५ प्रकाशित
हामीले दैनिक सेवन गर्ने तरकारी मात्रा मिलाएर पकाउँदा स्वादिलो मात्र हुँदैन, शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै मस्तिष्क पनि बढाउँछ । यसले खाद्य–उपचार (फुड थेरापी)को पनि काम गरिरहेको हुन्छ ।
पोषिलो परिकारले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाएर क्यान्सर, मुटुरोग र मधुमेहजस्ता असाधारण रोगको सम्भावनासमेत हटाउँछ । त्यसैले औषधीय महत्व भएका सागसब्जीका बारेमा सबैलाई ज्ञान हुनु आवश्यक छ।
नेपालमा रायो, तोरी, फापर, बेथु, मेथी, सौँप, पालुंगो, चौँसुर, छ्यापी, लसुनका सागका साथै फर्सीका मुन्टा, हरियो प्याज, निगुरो आदि हरियो सागको रूपमा खाइन्छ । यी सबै सागमा पाइने पोषक तत्व फरक–फरक छन् । तर, समान रूपमा क्लोरोफिल, भिटामिन, खनिज तत्व पाइन्छन् । हरियो सागमा मुटुको रोगदेखि कब्जियतसम्म, पेटको क्यान्सरदेखि गठिया र जोर्नी तथा हड्डीका समस्यासम्म हटाउने क्षमता हुन्छ । मस्तिष्कको क्षमता बढाउन तथा बूढोपनका लक्षण हटाउन सागयुक्त भोजन निकै नै लाभदायक हुन्छ ।
च्याउ – भिटामिन ‘बी’ का विभिन्न प्रकार र खनिज तत्व च्याउमा पाइन्छन् । सेलेनियम, तामा, फस्फोरस, पोटासियम, चिल्लो पदार्थ, कार्बोहाड्रेड भएको च्याउ उच्च कोटिको सब्जी हो । तर, यसमा ऊर्जा स्रोत (क्यालोरी)अत्यन्त कम हुन्छ । टिपेर जम्मा गरेको च्याउमा अल्ट्राभायोलेट (युभी) किरण दिएपछि भिटामिन डी पर्याप्त बनाउन सकिन्छ ।
वैशाख ६ र ७ गते ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै
डोटी नेपालको पहिको खोप सुनिश्चित जिल्ला
स्वस्थ्य शिशु जन्माउन गर्भवतिले यस्ता खाने कुरा खानुपर्छ
कसले प्रयोग गर्नु हुदैन अस्थाई साधन कपटी ?
किन बस्छ बच्चा पाठेघरबाहिर ?थाहा पाउनुहोस
हप्तामा कति पटक शारीरिक सम्पर्क गर्नु उचित, अध्यन के भन्छ ?
बायाँ फर्केर सुत्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक